धनुषा : प्रहरीकै मिलोमतोमा घुमुवा प्रहरीले खुलेयाम तस्करी, राजश्व गुम्दै ! | अपन जनकपुर
धनुषा : प्रहरीकै मिलोमतोमा घुमुवा प्रहरीले खुलेयाम तस्करी, राजश्व गुम्दै !
अप्पन समाचार डेस्क जनकपुरधाम : चाडपर्वको नाममा विगत जस्तै यसवर्ष पनि धनुषामा तस्करी मौलाएको छ । व्यापारीहरुले प्रहरीकै मिलोमतोमा तस्करी गर्ने गरेको केहि प्रमाण अप्पन जनकपुरले फेला पारेको छ ।
सबैला नगरपालिका १० मा घुमुवा प्रहरीले करिब चार वटा मोटरसाइकलमा भन्सार छलीको समान ल्याउनेहरुलाई समात्यो (हेर्नुस् तस्विर) । तर घुमुवाले उनीहरुलाई केहि बेरमै छाडे । स्थानीयका अनुसार तस्करबाट प्रहरीले महिनाबारी असुल्छन् । सोही कारण तस्करीका समान समातेर पनि व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।
व्यापारीको समान समातेर छाड्ने घुमुवा हुन्– खरिहानी प्रहरी चौकीका सुरेन्द्र ठाकुर । ठाकुर चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) लाल बहादुर तामाङकै निर्देशनमा व्यापारीबाट रकम असुल्ने गरेका छन् । चाडपर्वको नाममा रकम उठाउन प्रहरीले तस्करी खुल्ला गरेको स्रोतको दावी छ ।
ठाडी, दुहबी र गोबराही नाका हुँदै व्यापारीहरुले राजमार्गसम्म तस्करीका समान पुर्याउने गर्छन् । राजमार्ग र सिमा क्षेत्रको बीचमा पर्ने सबै प्रहरी कार्यालयका इन्चार्जलाई व्यापारीले महिनावारी तोकेका छन् । तस्करीका कारण दैनिक लाखौं रुपैया राजश्व गुम्ने गरेको छ ।